Wargeyska The Star oo qoray in Kenya ka digtoonaato ciidammada Danab ee Soomaaliya | Goojacade
Home War Wargeyska The Star oo qoray in Kenya ka digtoonaato ciidammada Danab ee...
Wargeyska The Star oo qoray in Kenya ka digtoonaato ciidammada Danab ee Soomaaliya
Wargeyska The Star, ee ah kan saddexaad ee loogu akhris badan yahay Kenya, ayaa qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay “Kenya waa inay si qoto-dheer ula socotaa dhaq-dhaqaaqyada Soomaaliya”.
The Star ayaa sheegay in ay dhacday booqasho heerkeedu sarreeyo oo ay Soomaaliya ku tageen mas’uuliyiin sare sare oo Maraykan ah, kuwaas oo kala ahaa Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto, iyo hoggaamiyaha ciidammada Maraykanka ee Afrika (AFRICOM) General Thomas Waldhauser. Waxay labada mas’uul kulamo la yeesheen Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya.
Wargeyska waxaa uu sidoo kale soo qaatay shirkii Maraykanka ku dhexmaray Ra’iisalwasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, iyo la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump, John Bolton. Waxaa shirkaasi sidoo kale ka qeyb-galay Wasiirka arrimaha horumarka ee Norway, Dag Inge Ulstein, taas oo loo baahan yahay, sida wargeysaka sheegay in Kenya aysan u deymo la’aanin maadaamma ay arrintu la xiriirto shidaalka laga helay badweynta Hindiya.
Wargeyska waxaa uu is weydiiyay sababta ay Kenya dhibbane ugu tahay “argegixisada”. Waxaa kale oo is weydiiyay cidda ay tahay inay difaacdo madaxbanaanida Kenya, iyadoo dalalka kale ay arrintaas ka fakarayaan.
Waxaa kale oo uu Waregsyka is weydiinayaa sababta ay Kenya uga hadli la’dahay kiiska maxkamadda cadaaladda ee dunida ee la xiriira muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, maadaama bisha September ay soo dhawdahay, xiligaas oo uu wargeyska sheegayo in la filayo inuu soo baxo go’aanka maxkamadaasi.
Wargeyska ayaa sheegay in aysan suuragal ahayn in danaha Kenya ay iska indha-tiraan madaxda dalka iyo waddamada kaleba, wuxuuna inta raaciyay waxa ku dhacay go’aankii ahaa in la xiro xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, iyo in waaxda socdaalka ay diyaar u tahay in shacabka ay la wadaagto dadka ajnebiga ah ee ku sugan gudaha Kenya.
Waxaa uu wargeyska warkiiska ku gaba-gabeeyay su’aal ah sida ay dowladda Kenya u kormeerto goobaha xuduudda ah ee dalka laga soo galo, si loo ilaaliyo danaha shacabka reer Kenya.
Previous articleQubrus: Nin qirtay in uu dilay 7 dumar ah
Next articleDaraasad: Dadka dunida ku nool oo uu hareeyay walwal, murugo iyo xanaaq